Crunchbase Enterprise ho an'ny Salesforce: Fantaro, ampidiro, ary ampifanaraho ireo angona Prospect B2B | Martech Zone
Crunchbase Enterprise ho an'ny Salesforce: Fantaro, ampidiro, ary ampifanaraho ny angona B2B Prospect
Zoma, Aogositra 28, 2020 Zoma, Aogositra 28, 2020 Douglas Karr
Orinasa manerantany manararaotra Crunchbase angon-drakitra hanatsara ny tahirin-kevitr'izy ireo momba ny asa aman-draharaha, hiantohana ny fahadiovan'ny angon-drakitra tsara, ary hanome ny ekipa mpivarotra azy ireo hahazo ny mombamomba ny orinasa ilain'izy ireo hahita fotoana mety.
Crunchbase dia nanangana vaovao Fampidirana Salesforce ho an'ny mpampiasa Crunchbase rehetra izany dia hahafahan'ny olona sy ny ekipa mpivarotra kely hahita haingana sy hiasa amin'ny fanantenana avo lenta.
Ity fanavaozana ity dia tonga amin'ny fotoan-tsarotra indrindra ho an'ireo mpivarotra - miaraka amin'ny 80% amin'ny orinasa mikaroka am-pahavitrihana ny fomba hanovana ny paikadin'izy ireo mankany amin'ny tsena nomerika, ary miaraka 32% ny mpanapa-kevitra milaza fa tena azo inoana fa misy fiovana mifandraika amin'ny areti-mandringana amin'ny fomba fivarotana eto.
Miaraka amin'ity fampidirana ity, ny mpampiasa Crunchbase dia tsy mila mandany fotoana sarobidy manondrana prospect tanana avy any Crunchbase mankany amin'ny CRM -n'izy ireo. Ny fampidirana Salesforce ho an'ny Crunchbase Enterprise dia ahafahanao manankarena ny firaketana ny kaonty Salesforce vaovao sy misy miaraka amin'ny angon-drakitra ara-bola tanterahin'i Crunchbase (antontan-kevitra 40+).
Crunchbase mankany amin'ny Salesforce Features
Mandehana amin'ny fikarohana ka hatrany amin'ny fanentanana vitsivitsy: Sivana fikarohana Crunchbase, ampiarahina amin'ny traikefa momba ny mombamomba ny orinasa vaovao avelao ny mpampiasa hianatra momba ny orinasa manokana, hahita ny vinavinany ary hitahiry azy ireo mivantana any amin'ny Salesforce.
Mifantoha amin'ny fivarotana fa tsy fidirana data: Jereo hoe iza no prospect efa ao amin'ny Salesforce ary ialao ny kopia. Rehefa mahita sy mitahiry ny vinavinam-baovao avy amin'ny Crunchbase mankany Salesforce ny mpampiasa, dia voatahiry ihany koa ny fampahalalana fototra momba ny orinasa ilaina amin'ny fanaovana azy manokana.
Manana ny tombam-pananany voatahiry: Miaraka amin'ny fifaninanana mahery vaika eo amin'ireo mpivarotra, ny fanamby voalohany dia matetika ny fangatahana fanantenana. Izay fanantenana apetraky ny mpampiasa amin'ny Crunchbase mankany Salesforce dia ho eo ambanin'ny anarany.
Sahirana ny mpivarotra mahita ireo mpanjifa ho avy izay mbola manana fahefa-mividy mandritra io fidinan'ny toekarena io. Mandany fotoana sarobidy izy ireo amin'ny fitadiavana sy fanomezana mari-pahaizana vaovao, ela be talohan'ny nandefasan'izy ireo mailaka voalohany aza. Ny fampidirana Salesforce vaovao anay dia manafaingana ny fizotran'ny fizotran-kevitra amin'ny alàlan'ny fampiraisana ireo fitaovana tadiavin'i Crunchbase sy ny angon-drakitra misy ny dalam-piasan'ny tarika mpivarotra. Ankehitriny, ny mpivarotra dia afaka mampifandray haingana ireo kaonty vaovao hitany tao amin'ny Crunchbase mivantana amin'ny CRM-ny. Ary, zahao mora foana ny kaonty Crunchbase tsy hita ao amin'ny ohatra Salesforce, mba hahafahan'izy ireo mahita kaonty izay mbola tsy nisy nitaky ny ekipany.
Arman Javaharian, lohan'ny vokatra Crunchbase
Crunchbase koa dia nanangana a fanavaozana tanteraka ny mombamomba ny orinasa miaraka amin'ny top overviews momba ireo teboka angon-drakitra manan-danja izay manampy ny mpivarotra haingana:
Fantaro izay ataon'ny orinasa iray sy ny toetoetran'ny fitomboany.
Fakafakao ny zava-bitan'ny orinasa amin'ny fampahalalana ara-bola ao anatin'izany ny famatsiam-bola sy ny fahazoana rehetra.
Halalino ny antsipiriany hahafahana manapa-kevitra raha mifanaraka amin'ny filan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampahalalana lalindalina momba ny haitao misy ny orinasa, ny tombam-bidin'ny vola miditra, ny olona ary ny mari-pahaizana amin'ny fitomboana.
Fantaro bebe kokoa momba ny Crunchbase ho an'ny orinasa
Fialana andraikitra: Douglas dia mpiara-manorina an'i Highbridge, dia Mpiara-miasa Salesforce